"Akukho okudlula" - lesi simiso kuye ahlushwe umkhiqizi, lapho vodka senziwa "embasi". Isebenzisa lesi simiso futhi manje, futhi sisasebenza lo mkhiqizo futhi sazise umthengi yesimanje.
Vodka eRussia njalo kudliwe, eshiwo yizimboni eziningi inqwaba. Ngakho-ke, eyakhululwa ngo-1973 Vodka "embasi" furore ekhethekile ungazange kukhiqizwa. Mina kahle ngokushesha njengoba lomkhiqizo elibizayo gourmet, futhi kusukela osukwini lokuqala lalisetshenziswa kuphela yokuhlanza ubisi ekhethekile.
Ngezinye "Crystal-Lefortovo" yadalwa aligcini ngokuphendula lo vodka, inkampani kukhiqizwa brand eziningi abadumile, futhi ngamunye sisebenzisa indlela ekhethekile yokuhlanza. Yilokho ihlukile iwumkhiqizo ezinhle - wokuqukethwe ubuncane fusel amafutha nezinye nomphumela ongemuhle lokugayeka kokudla emzimbeni. Ngemva kwalokhu vodka has a ikhanda, kuba isiphuzo lula futhi ethambile, kunobuciko emnandi futhi, yebo, ngenxa yazo zonke lezi zinzuzo odingeka kubantu.
Umenzi ubonisa ukuthi vodka "embasi" kuhlanganisa ukubunjwa yayo nahlanza kuphela ETHYL utshwala ikhiqizwa ukulungele ngokukhethekile impahla eluhlaza, namanzi, kuphela ihlanzekile elicwengekileyo. Isici esibaluleke kakhulu kwalo mkhiqizo ingabe izinga layo yokuhlanza. Lo mphumela kungaba ngempela uyaziqhenya, kodwa vodka akusho yanika isikhundla salo futhi uhlala ingashintshiwe ukunambitheka kanye ezakha kuze kube namuhla.
Ingqikithi impatho enjalo ilula: iprotheni ubisi ukuwela utshwala, lincishisiwe futhi sibopha iningi izinto eziyingozi. Ngemva it is elicwengekileyo off futhi isuswe ndawonye nabo, ukuhlinzeka yokuhlanza soft kodwa ngempumelelo kakhulu. Kukholakala ukuthi vodka "embasi" akudingi ekhethekile Ungadla sibonga sokungabi nhlobo aftertaste edabukisayo.
Ngokukhethekile ikhokhelwa umenzi yokuhlanza utshwala. Uveza ukuthi hhayi kuphela kungagcini filtration yobisi. Umkhiqizo ukufinyelela kulelo zinga ngemva sidlule izigaba eziyisithupha ukwelashwa okukhethekile, iminyaka eminingi inkampani ubuchwepheshe avuthiwe kakhulu futhi eziseqophelweni yayo. Utshwala sidlula isihlabathi, asebenza ngebhethri, amalahle, uwe etafuleni kumthengi isivele ehlukile kakhulu, kwekhwalithi ephezulu yevidiyo. Mayelana lomkhiqizo elibizayo Ungamtshela, kanye ukufuneka kakhulu ke. Azerbaijan, Armenia, Latvia, eJalimane, eNetherlands, France, iSerbia neMontenegro kuyinto vodka ethandwa kakhulu "I-embasi". Intengo ke uyahluka ruble ezimbili noma, anamakhulu mathathu. Futhi selikhiqize phezu engaphezu kwamashumi amane.
Umkhiqizo lithole imiklomelo eminingi ngenxa yobuqotho babo amasiko abo, futhi elihambisana namazinga adingekayo. Ngakho, ngo-2012, kube ukhishwa isihloko Kuhle Vodka 2012. Tasters vodka emhlabeni wonke Kuhlolwe kumuzwa nekhwalithi futhi ngenxa yalokho banquma ewufanele uzothatha indondo yegolide kuphela. Uphenyo uphuze kakhulu, futhi yonke thumba phansi komunye: "Indlu yenxusa" wesilisa odakiwe, kubukeka kukuhle futhi inenani enhle.